कंगनाको आरोप पछि समस्यामा विकास, सपोर्टमा आईन् पूर्व पत्नी
गफगाफ -केही दिन अघि मि टु क्याम्पियन मार्फत अभिनेत्री कंगना रनावतले निर्देशक विकास बहललाई यौन शोषणाको आरोप लगाएकी थिईन् । कंगनाले लगाएको यौन शोषणको आरोप पछि विकास बहल समस्यामा परेका छन् । उनका हातमा भएका केही प्रोजेक्टहरु समेत यतिबेला फुत्किएका छन् ।यहि आरोपपछि उनलाई आगामी सिनेमा सुपर ३० बाट अलग गरिएको छ । उता अमेजन प्राईम भिडियोले उनीसँग आगामी एक सिरिजको लागि गरेको करार रद्द गरेको छ ।
कंगनाले विकाससँग सिनेमा ‘क्वीन मा काम गर्दा विकासले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको उल्लेख गरेकी थिईन् । कंगनाले भनेकी थिईन् ‘उनी विवाहित भए पनि दिनदिनै नयाँ युवतीसँग सेक्स गरेको गफ दिन्थे । मसित अनावश्यकरुपमा टाँसिन्थे, मेरो कपालमा घुस्रिन्थे र भन्थे( तिम्रो कपालको सुगन्ध मलाई मन पर्छ ।कंगनाले लगाएको आरोपले एक्लिएका विकासको सपोर्टमा उनकी पूर्व पत्नी ऋचा दुवे आएकी छिन् । उनले कंगनाले विकासलाई लगाएको आरोपको घोर विरोध गरेकी छिन् ।
उनले ट्विट गर्दै कंगनालाई केही प्रश्नहरु गरेकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, कंगनाले लगाएको आरोप सहन नसक्ने छ । यो त मि टु नभएर मिमि जस्तो भयो । म महिलाहरुलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु के तपाई नियत खराब भएको पुरुषसँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ ? यस्ता व्यक्तिसँग घुम्न जाने, खाना खाने र रमाईला्े गर्नुको अलावा उसको साथ छोड्नुहुन्न र ?
उनले कंगनालाई भनेकी छिन्, यदि उसलाई मेरो श्रीमान्सँग यति धेरै समस्या थियो भने उसँग सन् २०१५ मा मधु मंतेना र मसाबाको विवाहमा किन नाचिन् त ?
यदि कंगनासँग आफ्नै कोठा थियो र अन्य सुविधा थियो भने विकास जस्तो खराब माछेसँग किन नाच्ने योजना बनाईन् त ? किन उनले यो सम्झौता गरिन् त ? अहिले कंगना यति ठूलो स्टार भईसक्दा पनि अहिले सम्म नबोलेर अहिले के पब्लीसिटीको राम्रो मौका मिल्यो भनेर यो कुरा गरेको हो ? यदि उनलाई चित्त बुझेको थिएन भने ्त्यतिबेलै विकाससँग सिधै कुरा पनि गर्न सक्थिन् नि । उनले किन गरिनन् त ?
उनले आफूले विकास र कंगनाको म्यासेजबाट भएको कुराकानी पनि हेरेको र अहिलेसम्म सबै सामान्य भएको थाहा पाएको उल्लेख गरेकी छिन् । तर अचानक कंगनाले यस्तो कुरा किन गरिन् उनलाई पनि अचम्म लागेको छ । उता कंगनाले पनि कहाँ बाकी राख्थिन् र । उनले पनि ऋचालाई यदि विकास राम्रो मान्छे थिए भने किन छोडिन् त भनेर उल्टै प्रश्न गरेकी छिन् ।